SANTHITSA - Page 14 of 107 - News and Entertainment
ဥရောပ အနောက်ပိုင်း ရေကြီးလို့ ရာနဲ့ချီသေ၊ ထောင်နဲ့ချီပျောက်
ဥရောပ အနောက်ပိုင်း ရေကြီးလို့ ရာနဲ့ချီသေ၊ ထောင်နဲ့ချီပျောက် မောင်ယဿ ( ဇူလိုင် ၁၇ ) ဥရောပအနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတွေထဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ဂျာမဏီ နိုင်ငံတွေ တွေမှာရေကြီးတာ တော်တော်ဆိုးတဲ့ အတွက် လူ၁၂၅ ဦး သေဆုံးပြီး ထောင်နဲ့ချီပြီး ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ဒေသခံ အာဏါပိုင်တွေက သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဥရောပ အနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတွေမှာ လေတိုက်ကြမ်း တာနဲ့ အပူချိန်မြင့်တက် မှု ရောပြီး ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မိုးကြီးကာ ဆိုးရွားတဲ့ ရေလွှမ်းမိုးမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးလေဝသ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဥရောပမှာ ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုအစုံ ဖြစ်နေပါတယ်။ အချို့ဒေသတွေမှာ မိုးခေါင် …
တရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဆီနိုဖမ်း က အလုပ်မဖြစ်ဘူလို့ မီဒီယာတွေရေးတော့မှ ဟန်ဂေရီအစိုးရ လန့်
တရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဆီနိုဖမ်း က အလုပ်မဖြစ်ဘူလို့ မီဒီယာတွေရေးတော့မှ ဟန်ဂေရီအစိုးရ လန့် မောင်ယဿ ( ဇူလိုင် ၁၇ ) တရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဆိနိုဖမ်း ၂လုံးထိုးပြီးတာတောင် ကိုဗစ်ပိုးကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ခန္တာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ ပဋိခန္တာပမာဏ မထွက်ဘူးလို့ မီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြလို့ ဟန်ဂေရီအစိုးရက ကာကွယ်ဆေး တတိယအလုံး ထိုးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ် ဗစ်တာအာ်ဘန်က “ ကျနော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေး ၂လုံး ထိုးပြီးတဲ့ သူတိုင်းကို နောက်ထပ်တစ်လုံး ထိုးဖို့ သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့မှာ စမှာပါ။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအလုံး ထိုးပြီးလို့ ၄လ ကျော်တဲ့ သူတိုင်းကို တောက်လျှောက်ထိုးပေးဖို့ ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပါပြီ” …
မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလိယဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတာ တောင်ကိုရီးယားသားတွေ လုံးဝမယုံ
မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလိယဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတာ တောင်ကိုရီးယားသားတွေ လုံးဝမယုံ မောင်ယဿ ( ဇူလိုင် ၁၇ ) အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး အင်စတီကျူ့ ရဲ့ ကိုရီးယား သင့်ခ်တန့်အကူအညီနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ ဆာဗေး အရ တောင်ကိုရီးယားသား ၁၀ဦးမှာ ၉ ဦးက မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရက နျူကလိယဖျက်သိမ်းမယ်လို့ ဆိုလာရင် လုံးဝမယုံပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒိဆာဗေးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ှနှစ်ကတည်းက နှစ်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒီနေ့အထိ အပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလိယ ဖျက်သိမ်းဖို့ ကိစ္စကို လုံး၀ စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ တောင်ကိုရီးယားသား တွေက ဆိုပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်ဆောင် ကင်ဂျုံအန်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ တောင်ကို ရီးယားသား ၁၈နှစ်နဲ့အထက် ၁၀၀၃ ဦးကို …
ထိုင်းအစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသမားတွေကို ရော်ဘာကျည်တွေ နဲ့ စပစ်ပြီ
ထိုင်းအစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသမားတွေကို ရော်ဘာကျည်တွေ နဲ့ စပစ်ပြီ မောင်ယဿ ( ဇူလိုင် ၁၉ ) ကိုဗစ်ရောဂါ ကုသရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်မှု ဆိုင်ရာတွေမှာ အားနည်းတဲ့ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မကျေနပ်လို့ နဂိုရ်ကတည်းက အစိုးရကို မကျေနပ်တဲ့ သူတွေက လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြတာကို ထိုင်းရဲတွေက မီးသတ်ပိုက်တွေ နဲ့ ပတ် ၊ ရာဘာတုတ်တွေနဲ့ ရိုက် ၊ ရော်ဘာကျည်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး မနေ့က နှိမ်နင်းခဲ့ ပါတယ်။ ဘန်ကောက်အစိုးရက ၅ယောက်ထက်ပိုမစုရလို့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့ မညီဘဲ ဆန္ဒပြတဲ့ သူတွေကို နှိမ်နင်းတာလို့ ထိုင်းရဲတွေက ဆိုပါတယ်။ ဆန္ဒပြသမားတွေကတော့ ဆန္ဒပြမှုကို …
ကျန်းမာအောင်စားမှ ဘဝအနှစ်သာရလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကရီနာကပူး
ကျန်းမာအောင်စားမှ ဘဝအနှစ်သာရလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကရီနာကပူး မောင်ယဿ (ဇူလိုင် ၂၀ ) ဘောလီးဝုဒ်က အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် ဆယ်လီကြီး ကရီနာကပူးက သူမရဲ့ တနလာင်္နေ့ညစာကို အင်စတာဂရမ်မှာ ပို့စ်တင်ပြီး ကျန်းမာတယ် ဆိုတာ ဘဝတစ်ခုရဲ့ ဆုလဒ်ပါ၊ ကျန်းမာအောင် စားသောက်နေထိုင်ခြင်းသည် သာလျှင် ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရပါလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကရီနာက တနလာင်္နေ့ ညစာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်လိုက်တယ်။ ပုံစာအဖြစ်နဲ့ “ ကျမရဲ့ ညစာမှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်လို ဗီတာမင်ဘီ အပါအဝင်ဗီတာမင် အေ၊ စီ ၊ အီး နဲ့ ကေ ပါတဲ့ ဘရိုကိုလီ ( ပန်းပွင့်စိမ်း) ပါတယ်။ အသားဓာတ်ကို …
ကမ္ဘာ့ ထရန်စစ္စတာထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလို့ အီလက်ထရောနစ်ဈေးကွက် ပျက်နိုင်
ကမ္ဘာ့ ထရန်စစ္စတာထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလို့ အီလက်ထရောနစ်ဈေးကွက် ပျက်နိုင် မောင်ယဿ ( ဇူလိုင် ၁၄) ထရန်စစ္စတာ ဆိုတာ အီလက်ထရောနစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ အခြေခံ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထရန်စစ္စစတာတွေ လိုသလို မှာယူလို့ မရလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အိမ်စီးကားနဲ့ ထရပ်ကားလုပ်ငန်း တွေ ထိခိုက်လာပြီး ကားဈေးကွက်မှာ ၁၀.၅ % နှုန်းအထိ ဈေးတွေ တက်လာပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ မနှစ်က ဇွန်လကနေ စတင်ပြီး အထွေထွေ ကုန်ဈေးနှုန်း တက်လာလို့ ကုန်ပစ္စည်း စုစုပေါင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို တွက်ချက်ကြည့်ရာ ပြီးခဲ့တဲ့လအထိဆိုရင် ၅.၄% အထိ တက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုဖြစ်တာက နှစ် ၃၀ အတွင်း …
Stay home ဆိုရင် stay home ပဲ ၊ အပြင်မထွက်နဲ့ ။ What the Demo!
Stay home ဆိုရင် stay home ပဲ ၊ အပြင်မထွက်နဲ့ ။ What the Demo! မောင်ယဿ (ဇူလိုင် ၁၄ ) မလေးရှားကဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါ။ ကိုဗစ်တွေပြန့်နေတဲ့ ဒေသမှာ လူတွေကို Stay home နေရမယ်လို့ ဒေသန္တရ အာဏါပိုင်တွေက အမိန်ကထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ သားအဖ ၂ယောက် အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး ကြက်တောင်ရိုက်လို့ ရဲတွေက လာပြီး ဖမ်းကာ ဒဏ်ရိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲ့လို့ရဲတွေ လာပြီး ဖမ်းတဲ့ဓာတ်ပုံက လိုင်းပေါ်မှာပြန့်သွားလို့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အချေအတင် စကားများကြပြီး အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ တိုင်တန်းလျှားတစ်ခုမှာ ဖြစ်နေတာပါ။ ရဲတွေ ဖမ်းနေချိန်မှာတော့ …
ကိုဗစ္ကိုကုသေနတဲ့ ေဆး၂မ်ိဳးလုံး သက္ေရာက္မႈ မရွိဘူးလို႔ WHO ဆို
ကိုဗစ္ကိုကုသေနတဲ့ ေဆး၂မ်ိဳးလုံး သက္ေရာက္မႈ မရွိဘူးလို႔ WHO ဆို ေမာင္ယႆ ( ဇူလိုင္ ၁၃ ) ကိုဗစ္-၁၉ နဲ႔ ေဆး႐ုံတက္လာတဲ့ လူနာေတြကို ကုသေပးေနတဲ့ ရမ္ဒီဆီးဗား နဲ႔ ဟိုက္ဒ႐ိုေအာက္စီ ကလို႐ိုကြင္း ေဆး ၂မ်ိဳးလုံးက လူနာေတြကို ျပန္လည္ေနေကာင္းလာဖို႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ WHO က ျပဳလုပ္တဲ့ စမ္းသက္ခ်က္ရလဒ္ကို တနလာေနၤ့ထုတ္ Annals of internal medicine မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စမ္းသက္ခ်က္ရလဒ္ေတြအရ ဟိုက္ဒ႐ိုေအာက္စီကလို႐ိုကြင္းနဲ႔ ကုတဲ့ လူနာ ၈% နဲ႔ ရမ္ဒီဆီးဗားနဲ႔ ကုတဲ့ လူနာ ၇% တို႔ဟာေဆး႐ုံမွာပဲ အသက္ဆုံးရႈံးလိုက္ရပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒိေဆးေတြနဲ႔ …
ေနာ့သ္အန္ဘာလန္ က ေသမင္းတမန္ ပန္းၿခံ
ေနာ့သ္အန္ဘာလန္ က ေသမင္းတမန္ ပန္းၿခံ ေမာင္ယႆ (ဇူလိုင္ ၁၂ ) ကမာၻႀကီးက ထူးထူးဆန္းဆန္းအရာေတြနဲ႔ ျပည္ႏွပ္ေနတဲ့ ေနရာတစ္ခု ပါ။ အဲ့ဒိလို ထူးဆန္းတဲ့အရာေတြထဲက ထူးဆန္းတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို ျပပါဆိုရင္ အဂၤလန္ ေနာ့သ္အန္ဘာလန္ က ေသမင္းတမန္ပန္ၿခံ ကိုျပရမွာပါပဲ။ လူ႔အသက္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အပင္ႀကီး အပင္ငယ္ေတြစိုက္ပ်ိဳး ထားတဲ့ ပန္ၿခံႀကီးတစ္ခုပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ေတြကို ဆြဲေဆာင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေအာန္ဝွစ္ ပန္းၿခံႀကီးထဲက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းလြန္းလို႔ အဲ့ဒိေနရာေလးကို အခိုင္အမာ ပိတ္ကာ ထားရပါတယ္။ သံတံခါးေတြ အခိုင္အမာနဲ႔ ပိတ္ကာထားတဲ့အျပင္ ဂိတ္တံခါး၀ မွာလည္း အ႐ိုးေခါင္းပုံနဲ႔ …
၂၀၃၀ မှာ အမေရိကန်ကမ်းခြေဒေသတွေ ရေမြုပ်မယ်လို့ နာဆာ ဟောကိန်းထုတ်
၂၀၃၀ မှာ အမေရိကန်ကမ်းခြေဒေသတွေ ရေမြုပ်မယ်လို့ နာဆာ ဟောကိန်းထုတ် မောင်ယဿ ( ဇူလိုင် ၈) လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အမေရိကား ကမ်းခြေဒေသတွေ ရေလွှမ်းမိုး နေခြင်းက လာမယ့် ၂၀၃၀ ဆိုရင် ပိုမိုဆိုးဝါး လာပြီး နေရာ တော်တော်များများ ပင်လယ်အောက်ရောက်သွားမယ်လို့ အမျိုးသား အာကာသသိပ္ပံအဖွဲ့ (နာ ဆာ ) ကဟောကိန်းထုတ် လိုက်ပါတယ်။ ဟာဝိုင်ရီ တက္ကသိုလ်က ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ပေ ပြောင်းလဲမှု လေ့လာရေးအဖွဲ့ နဲ့ နာဆာတို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြုလုပ်တဲ့ သုတေသန ရလဒ်အရ လက်ရှိနှစ်စဉ်မြင့်တက်နေတဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရယ် ၊ ၁၈နှစ်ခွဲ မျာတစ်ကြိမ် ကပ်သွားသွားတဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ လနဲ့ ကြားက …
Previous 1 …4567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 107 Next